202 Indlu entsha enefenitshala kweyona ndawo igqwesileyo
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguMaria Clara
UMaria Clara unezimvo eziyi-111 zezinye iindawo.
Indlu entsha yesitudiyo eyi-50mts2 enegumbi lokulala eli-1 elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala kunye negumbi elineebhedi ezi-2 zabantu abangabodwa; epholileyo ngenxa yokuthuthuzela kweendawo, kwaye eyona ... indawo yayo.
Ifakwe kwindawo entle evaliweyo enesitayile sesiNgesi esibonelela ‘umgama wokuhamba’ ufikelelo kuMmandla T, uZone G, amaZiko okuthenga eAndino. I-Atlantis kunye ne-El Retiro, i-Andrés DC, i-Financial Zone, i-Parque El Virrey kunye ne-Parque de la 93.
Yeyona ndawo ilungileyo eBogotá ngaphandle kwamathandabuzo!
Le ndlu intle ikwindawo evaliweyo, inamagumbi ama-2 estudio kumgangatho wesibini, igumbi lokuhlambela elinamanzi ashushu, ikhabhathi, idesika enesitulo, i-mini-bar fridge kunye nesitovu sombane esinendawo ezi-2, enezixhobo ezisisiseko: iindawo ezi-4 zesitya, i-cutlery. , iiglasi, 1 epanini, 1 imbiza kunye 1 embizeni. Ezikhethekileyo kwiintsapho zokuhamba, abantu bezoshishino kunye nokuhlala kweeveki okanye iinyanga.
Ukuhlala ixesha elide kuneveki enye, sihlamba iitawuli zakho kunye neebhedi zonke iintsuku ezisi-8. Ukuhlamba iimpahla zakho zobuqu, unokuqesha iinkonzo zamaqonga akhoyo ekhaya ngokwakho.
Ukucocwa kwendlu yesitudiyo sakho unokuqesha iidola ezingama-40,000 kwiinkonzo zomnye wamanenekazi eqela lethu lokucoca xa uyifuna.
Okugqwesileyo 60 mega wifi. Khuphela isantya 69.3 megabytes kunye nesantya sokulayisha 87.5.
Ngaphandle kwamathandabuzo, lilungelo ukuba ubekwe kweyona ndawo ibalaseleyo yeBogotá: El Nogal, kwisitrato esibanzi, esisekoneni sibonelela ngeenketho ezimnandi zesidlo sakusasa, sasemini okanye sasemini: kwindawo yokutyela yeBakery Cafe.Doña Dicha. Umgama weemitha ezili-10 kuphela, uya kufumana indawo yokutyela yase-Alelita apho, ukuba awufuni ukupheka, unokuqesha ekhaya ukuba uyafuna, ukhetho olumnandi lokutya okwenziwa ekhaya.Okanye ukuba uyathanda, uneetafile ezicwangciswe kwindawo ethe cwaka.
Unokuhamba ngaphantsi kweemitha ezingama-200 ukuya eCarrera 9a kunye neCarrera 11, iindlela eziphambili ezineendawo zokutyela ezigqwesileyo kunye nefenitshala yanamhlanje, iivenkile zempahla kunye nezixhobo.
Ngaphantsi kwe-1 km, imizuzu eyi-10 uhamba kwindawo entle enemigca yomthi kunye nekhuselekileyo, uya kuba seCalle 72 kunye ne7ma, Centro Financiero de Bogotá.
Umbuki zindwendwe ngu- Maria Clara
Me encanta conocer el mundo y disfrutarlo con Airbnb. Ojalá pueda seguir haciendolo. Por ahora, me encanta compartir mi espacio con usted, Un abrazo
Ndisesandleni sakho ngeselfowuni yam kunye ne-imeyile kwaye ndiya kukulungela ukuphendula imibuzo yakho xa uyifuna.
Inombolo yomthetho: 101450
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R1540
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bogotá